माईसंसारकी सुमिना बुझाइ ठाउंमा ल्याउने हो की?
सर्बप्रथम त कुकुरले आची खानु भन्दा पहिले डिस्को गएर समाचारमा छाएको मा बधाइ। सानै उमेरमा सेलीब्रिटी भएछौं,पत्रपत्रीकमा फोटो छापियो,११,१२ गन्दै गरे,अहिलेलाइ पत्रिकाकै थोपडामै गर्ब गरे। सरकाले अनुमती दिएको डिस्कोमा सबेरै पूगेकोमा स्विकार गर्यो। आखिर मान्छे नै उपस्थित भएपछी स्कुले ड्रेसको के कुरा भो र? बंक पार्टीमा
भेला भएकोमा गर्भ या हिनताबोध लिनु महत्ब होइन,खाने बेलामा हग्ने हग्ने बेलामा खाने त्यसमै कुरो टुंगियो,सायद त्यसैले लाज लाग्यो होला।
म त भन्छु एक दुइ जना बंक गरेर कुनै झुण्डमा नझ्याम्मिय कमसल नागरिक कसरी जन्मिन्छ। सबै असल नागरिक भए त जेलका कर्मचारीको भोली नै जागिर चट। यो हिनमय नौटंकी बर्तमान समयको नया आयाम हो भनेर सोच्नु बेकार हो। पौराणीक कालमा पनि दैत्य भएको कस्लाइ थाहा छैन? तिम्रा जेल नेलका टाइटुइ माइसंसारमा देखेको थिए। संसारै सांगुरो भएको अबस्थामा हलिउड स्टाइलका कथा दिनानु दिन पत्रपत्रिकमा आइरहन्छन। अमेरिकमा ११ बर्षको बच्चाले रक्सी पियो, नेपालमा ११ कक्षामा पढ्नेले बोतल समाते,यसमा संसारले नौलो मान्दैन। तिम्रो आपत्ती जनक अबस्थाको माने नबुझेकोमा ११-१० मा पुग्नु पर्ने भो। मान्छेको उमेर फरक हुन्छ त्यसै अनुसार उसको दिमागको बिकास हुन्छ। ११-१०मा पढ्नेले कती पय बयस्कका कुरा बुझाइको दायरा भन्दा पर हुन्छन। बिकसित देशमा ११-१०का लागी ब्यसकका संसारबाट कानुनले नै नजिक आउन अनुमती दिंदैन। तर १०+१मा पूगेकाले आफूले बयस्क ठान्दा ठान्दै बुझाइ बयस्कमा नआउनुमा मलाइ छक्क परू परू लाग्यो।
प्रहरी नायब उपरीक्षक राधिका खड्का को हुन परिचय चाहिएन,सरकारी बर्दीमा उनी आउछिन त उनको बोलीनै कानुन हो। कानुनको खिलाफमा जानु म उचित ठान्दीन। उनी कसरी जन्मिन?उनका बुवाले हलो जोतेर पक्कै उनलाइ भेटाएका होइनन,नत न‍-सुमिनालाइ? सुमिना तिम्रो बुझाइ सोझाउन माथीका पाठ उपपाठ बाचन गरेको होइन। तर सार्बजनिक अबस्थामा योनजन्य क्रियक्रलापमा प्रहरीले हात किन लगायो भनेर प्रश्न सोध्यौ। यसमै हांसो उठ्यो। हास्न पनि ठिक होइन कि, म पाइला पछाडी हटाउंदै छु। प्रहरीले बटौलीको डांका समात्ने मात्र होइन समाजमा असान्धर्भिक हर कुरा प्रहरीको चासोको बिषय हुन्छ। आफ्नो अधिकारमा जे गर्न पनि सकिन्छ तर समाजमा कानुन छ,त्यसको हेक्का प्रशासनले गर्छ। बाटोमा नांगै हिन्नु आफ्नो अधिकार होला तर त्यसमा अरुलाइ असर पर्छ कि पर्दैन त्यो प्रहरीले बिचार गर्छ,अरुलाइ असर पारे पुलिस हत्कडी लिएर जाइ लागे कामी गाली नबर्साउनु,बरु आफ्नो बुझाइ ठाउंमा ल्याउनु।
(यो ब्लग सुमिनाको ब्लगमा आधारित)
Posted by: nepalean Labels: अनौपचारिक
हा.. हा… हा… हा… हा…..
एकजना एशीयन डक्टरले अमेरिकामा आफ्नो घरको बाथरुममा पाईपलाईन मर्मत गर्न एकजना प्लम्बरलाई बोलाएछन । काम सक्केपछि प्लम्बरले ४०० डलरको को बिल दिए...
क ख ग सिक्ने सजिली तरिक: गीतको माध्ह्यम बाट
क ख ग सिक्ने सजिली तरिक: गीतको माध्ह्यम बाट । नेपाली लाई त क ख ग सिक्न आब्श्यक पर्दैन तरा तपाइ कसैलाइ सजिलै क ख ग सिकाउन चाहनुहुन्छ भने यो...
प्रथम अन्तराष्ट्रिय नेपाली ब्लगर भेला सम्पन्न । सम्पूर्ण टेक्स्ट Archives खुल्ला ।
यो भेलाको सम्पूर्ण टेक्स्ट Archives (विना सम्पादन) जस्ताको त्यस्तै हेर्न मिल्ने बनाएर यहाँ राखीएको छ । भेलाको सम्पूर्ण कार्यक्रम र वार्ताल...